Gobalka Banaadir oo shaaciyay in aysan wax kaqaban karin daadka Roobka | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Gobalka Banaadir oo shaaciyay in aysan wax kaqaban karin daadka Roobka
Gobalka Banaadir oo shaaciyay in aysan wax kaqaban karin daadka Roobka
Afhayeenka Maamulka gobolka Banaadir Saalax Xasan Cumar Saalax Dheere oo warbaahinta kula hadlay muqdisho ayaa sheegay in dowladda hoose ee Xamar aysan ku filneyn xal u helida saameynta ka dhalatay Roobabkii ka da’ay magaalada ee Xeray wadooyinka .
Afhayeenka ayaa sheegay in roobabka socda ay saameyn adag ku yeesheen qoysaska danta yar ee degan guryaha qasiimka ah iyo buushashka, isagoo Ganacsatada iyo dad kale ee wax heysta ugu baaqay in dadkaas ay gurmad gaarsiiyaan.
Maamulka Gobolka Banaadir iyo qubaro caalami ah ayuu Saalax dheere sheegay inay sameeyeen daraasad ku aadan sidii wax looga qaban lahaa biyo fariisidka waddooyinka, balse lagu wargeliyay inay qarash farabadan ku baxeyso arrintaas, wuxuuna Afhayeenka qiray in Maamulka uu xiligaan bixin karin qarashka lagu hagaajinayo waddooyinka.
Saalax Xasan Cumar ayaa sheegay in dowlada Hoose aysan awoodin lacagta lagu qiimeeyay in lagu dhiso biyo qabantiga magaalada .
Ugu dambeyn wuxuu baaq udiray wadamada daneeyo arrimaha Soomaaliya iyo Bankiga Aduunka in ay qeybqaatan dib u dhiska goobaha biyo qabadka ee ku burburay dagaaladi ka dhacay dalka.
Maqaal horeFaahfaahin ka soo baxeyso Masjid la weeraray
Maqaal XigaWasiirka difaaca oo la kulmay Safiirka Mareykanka.